कपिल शर्मालाई तनाव ! – Patrika Nepal
कपिल शर्मालाई तनाव !
पुष २१, २०७८ बुधबार 37
काठमाडौं। बलिउड कमेडियन कपिल शर्मा यो समय निकै तनावमा छन्। उनी तनावमा हुने मुख्य कारण उनको चर्चित ‘द कपिल शर्मा शो’ की कलाकार सुमोना चक्रवर्ती हुन्।
सुमोनाले यो शोमा लामो समयदेखि कपिल शर्माकी श्रीमतीको भूमिकामा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहेकी छन्। यी अभिनेत्री अहिले कोरोनाभाइरसको शिकार भएकी छन्। सुमोनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि कपिल केही तनावमा देखिएका छन्।
सुमोनाले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएकी छन्। उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाकोबारेमा पनि जानकारी दिएकी छन्। सुमोनाका अनुसार उनी होम क्वारेन्टाइनमा छिन्। उनले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्न फ्यानमाझ आग्रह गरेकी छन्।
सिद्धार्थ शुक्लाको निधनपछि पहिलोपटक खुलेर बोलिन् शेहनाज, भन्छिन्, ‘उ फेरि आइसकेको छ’
एजेन्सी । चर्चित टिभि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको निधनपछि उनकी प्रेमिका शेहनाज गिलले पहिलोपटक यसबोरे खुलेर कुरा गरेकी छिन्।
उनले सिद्धार्थलाई गुमाएपछि त्यस पी,डाबाट कसरी अघि बढिन् र अब के सोच्छिन् भन्नेबारे जानकारी दिएकी छिन्।
शेहनाजको ब्रम्हाकुमारी बीके शिवानीसँगको कुराकानी सुनेपछि अभिनेत्रीले आध्यात्मिक बाटो रोजेको थाहा पाउन सकिन्छ।
४ जनवरीमा शेहनाजले बिके शिवानीसँगको कुराकानीको भिडियो शेयर गरेकी छिन्। बीके शिवानी सिद्धार्थ र शेहनाजककी सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्। उक्त कुराकानीको भिडियो पनि भारतमा भाइरल भइरहेको छ।
उनी भन्छिन्, ‘कसै न कसैको कोइ छाडेर जान्छ नै। मलाई लाग्छ, जे मैले पनि अनुभव गरेँ कि हामीले अब अझै बाँच्न छ भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो कति राम्रो यादहरु छन् भनेर सोच्नुपर्छ।’
उनले अघि भनेकी छिन्, ‘म अब सोउल कन्सियस हुँ। म अब यस्तो सोच्छु कि त्यो आ,त्मा (सिद्धार्थ) ले मलाई कति धेरै ज्ञान थियो। म नबुझ्ने थिएँ। मलाई मानिसहरुको बारे जानकारी थिएन। म सोचो थिएँ। मलाई त्यही आ,त्माले यति धेरै कुरा सिकायो। जिन्दगी के हो भनेर सिकायो। भगवानले मलाई उसँग भेट गराएका थिए।
उनको यात्रा पूरा भएको छ। उनको कपडा फेरिएको छ। उ कहीँ न कहीँ आइसकेको छ। उनको अनुहार बदलिएको छ। तर उ यस्तो रुपमा आएको छ, हाम्रो सम्पर्क नै छैन। र यो निरन्तर यस्तै रहनेछ।’
शेहनाज बदलिएकी छिन्। उनको लुक्ससँगै सोच पनि बदलिएको छ। लामो समय उनले सिद्धार्थको अभाव झेलेकी थिइन्। उनी स्तब्ध थिइन्। तर अहिले उनले आफूलाई सम्हालेकी छिन्।
Prevपुसको चिसोमा किन तात्दैछ सेयर बजार ? यसो भन्छन् ब्रोकर
Nextकठै ! श्रीमतीको खुट्टा ढोगे अर्जुनले तर पग्लिएन मन राम्रोसँग जाउ है भन्दै श्रीमतीले गरिन् विदाई (भिडियो हेर्नुहोस्)
पुष २५ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल